कोरोना महामारीका कारण रोकिएको ‘घिन्ताङ’ को छायांकन सुरु - City Post Daily
September 19, 2021 मनोरञ्जन
काठमाडौं, ३ असोज । कोरोना महामारी र लकडाउनका कारण रोकिएको फिल्म ‘घिन्ताङ’ को छायांकन सुरु भएको छ । फिल्म शुक्रवारबाट फ्लोरमा निस्किएको हो । पनौतीको खोपासी गाउँमा पहिलो सेड्युलको छायांकन हुने निर्देशक श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन ।
एक समयका सफल निर्देशक दीपक श्रेष्ठले सात वर्षपछि निर्देशनमा कमब्याक गरेको फिल्म ‘घिन्ताङ’ को छायांकन सुरु भएको छ ।
फिल्ममा अभिनेता गौरव पहारी र अभिनेत्री केकी अधिकारी मुख्य भूमिकामा छन् । सुटिङ सेटबाट बाहिरिएको एक तस्बिरमा उनीहरुलाई भिन्न लुक्स र गेटअपमा देख्न सकिन्छ । श्रीमतीको निधनपछि एकल जीवन विताइरहेका दलित समुदायका धने (गौरव) र श्रीमानको निधनपछि एक्ली भएकी बाहुन समुदायकी लक्ष्मी (केकी) बीचको प्रेम सम्बन्धको कथालाई फिल्मलाई देखाइनेछ ।
साहित्यकार मन्दिरा ‘मधुश्री’ ले लेखेको ‘मासुको मुल्य’ कथामाथि निर्माण भइरहेको फिल्ममा नीर शाह र मदनकृष्ण श्रेष्ठको विशेष भूमिका रहनेछ । निर्देशक श्रेष्ठले आफूले अहिलेसम्म निर्देशन गरेका फिल्मभन्दा ‘घिन्ताङ’ विल्कुलै फरक हुने दाबी गरेका छन् । आफैंले निर्माण गरेको फिल्म ‘बोक्सीको घर’ का लागि कपाल मुन्डन गरेकी केकीले यो फिल्ममा नक्कली कपाल लगाएकी छन् ।
यसैगरी, कोरोना महामारीअघि हरेक वर्षको दशैंमा फिल्म रिलिज गर्न निर्माताबीच हानाथाप हुन्थ्यो । किनकि, दशैं विदा फिल्म रिलिजका लागि सबैभन्दा राम्रो समय हो । तर, गत वर्ष दशैंमा कोरोनाका कारण सिनेमा हल सुनसान भए । यस वर्षको दशैंमा भने नयाँ फिल्म रिलिज हुने भएको छ । फूलपातीपछिको दशैं विदा हत्याउन शुक्रवार फिल्म ‘धन्दागिरी’ ले रिलिज डेट घोषणा गरेको छ ।
असोज २५ गते (फूलपातीको अघिल्लो दिन) लाई प्रदर्शन मिति घोषणा गर्दै निर्माण टिमले शुक्रवार ट्रेलर पनि सार्वजनिक ग¥यो । ट्रेलरमा एक्सनलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ । अभिनेता सविन श्रेष्ठ र अभिनेत्री छुल्ठिम गुरुङको मुख्य भूमिका रहेको यस फिल्ममा दिनेश खड्का, दिनेश डिसी, सुशील पोखरेल, स्व. दीपक क्षेत्री, स्व. बिएस राणा लगायतको पनि अभिनय देख्न पाइन्छ ।
नरेन्द्र भट्टराईको कथा र निर्देशन रहेको फिल्ममा दिनेश खड्का एसोसियट निर्माता र कुमार प्रसाद ओझा कार्यकारी निर्माताको रुपमा छन् । कवि भक्त क्षेत्री र फुर्वा दोर्जे तामाङ फिल्मका निर्माता हुन् । आरआर फिल्म्सको ब्यानरमा निर्माण भएको फिल्मलाई रोहित कट्टेल र रत्न श्रेष्ठले वितरण गर्नेछन् । फिल्मले दर्शकलाई भरपूर मनोरञ्जन र सन्तुष्टि दिने निर्देशक भट्टराईको दाबी छ ।
यो फिल्मको डिजिटल राइट्स डिएआर मुभिज एन्ड फिल्म्सले लिएको छ । विगत लामो समयदेखि संगीत तथा म्यूजिक भिडियोमा निरन्तर काम गर्दै आएको यो कम्पनीले अब नेपाली फिल्मको डिजिटल बजारमा पनि आफ्नो उपस्थिति जनाउने भएको छ । डिएआर मुभिजले ‘धन्दागिरी’ सँगै अन्य पाँच फिल्मको पनि डिजिटल राइट्स खरिद गरिसकेको सञ्चालक श्याम धितालले बताए ।